Maamulka Degmada Baraawe oo codsaday in laga caawiyo arrimaha caafimaadka – Radio Muqdisho
Maamulka Degmada Baraawe oo codsaday in laga caawiyo arrimaha caafimaadka
Maamulka magaalada Baraawe ee gobalka Shabeelada Hoose ayaa codsady in gacan laga siiyo sidii loo soo celin lahaa adeegayada caafimaadka ee Dagmadaasi.
Guddoomiyaha degmada Baraawe Xuseen Barre Maxamed oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa tilmaamay in xarumaha caafimaadka ay ka jirto dawo yari, isla markaana ay u baahanyihiin in arrimahaasi laga caawiyo, si dib loogu soo celiyo adeegyada caafimaad ee ay bulshada tebayaan.
“Dhanka caafimaadka aad ayuu u hooseeyaa, waxaana ka codsaneynaa hay’adaha samafalka iyo dad kale ee gacan ka geysan kara in ay ka qeyb qaataan sidii gurmad caafimaad loo keeni lahaa xarumaha caafimaadka ee degmada Baraawe” ayuu yiri Guddoomiyaha degmada.
Xuseen Barre Maxamed ayaa dhanka kale tilmaamay in xaaladda amni ee degmadu ay tahay mid la isku haleyn karo, isla markaana uu maamulkooda gacan ka geystay sidii amniga xoogga loo saari lahaa, isagoo shacabka ka codsaday inay ka qeyb qaataan ololaha nadaafadda ee iminka ka soconaya qeybo ka mid ah degmada Baraawe.
Diyaarad sidda qaxooti Soomaaliyeed oo ku soo wajahan Muqdisho